कर छुट दिन पुनः आयोग गठन गर्ने योजना असफल | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
कर छुट दिन पुनः आयोग गठन गर्ने योजना असफल
काठमाडौं । २० अर्ब रुपैयाँ कर छुट दिएपछि बाँकीलाई करको बोझबाट मुक्त गर्न कर फर्छ्योट आयोग गठनको तयारी भएको खुलेको छ ।
वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ड लुम्बध्वज महतको आयोगले २० अर्ब रुपैयाँ बढी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आयकरलगायत अन्य शुल्क छुट दिएपछि थप १० अर्ब छुट दिनका लागि त्यसबेला आयोग गठन गर्ने तयारी भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका सचिवको असहमति र महतको अध्यक्षतामा गठित आयोगले पुनः आयोग गठन गर्न नहुने सिफारिस गरेपछि रोकिएको थियो ।
महतको संयोजकत्वमा गठित आयोगको कार्यकाल सम्पन्न भएपछि कर फर्छ्योटका लागि पुनः आयोग गठन गर्ने तयारी भएको अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव राजन खनालले बताए । आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढेपनि पछि रोकिएको उनले जानकारी दिए ।
व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिको बिहीबारको बैठकमा सचिव खनालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फर्छ्योटको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेकाले धेरै कुरा बोल्न नमिल्ने बताए ।
हाल अख्तियारले अनुसन्धानका लागि मागेको कागजात उपलब्ध गराई सहयोग गरिरहेको उनले जानकारी दिए । आन्तरिक राजश्व विभागका उपमहानिर्देशक चन्द्रकला पौडेलले पनि आयोगलाई अनुसन्धानमा सघाइरहेको बताइन् ।
डुबेको कर असुल गरेको हो : डा. महत
आयोग गठन गरेर विवादित बनेका पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले राज्यको डुब्न लागेको झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ राजश्व आयोगमार्फत असुली भएको जिकिर गर्दै आफ्नो बचाउ गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र व्यवसायीको अनुरोधमा सरकारले बेलाबेलामा आयोग गठन गरेर कर फर्छ्योटको काम गरिरहेको बताउँदै उनीहरुको काममा शंका गर्न नहुने जिकिर गरे ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाको सिफारिसमा लुम्बध्वज महतलाई आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस गरेको बताउँदै उनले भने, “उनी मेरा नातेदार पनि हैनन् । यसलाई राजनीतिक रङ दिने काम नगर्नुस् ।” यसअघि पूर्वप्रधान न्यायाधिश हुनुअघि अनुपकुमार शर्मा, कर विज्ञ नारायणराज तिवारी र संघको सिफारिसमा महतलाई नियुक्त गरेको उनको भनाइ छ ।
आफू अर्थमन्त्री भएका बेला कर प्रणालीमा सुधार भएकाले राजश्व संकलन बढेको जिकिर गर्दै उनले भने, “कर प्रशासनमा भएको सुधारले आज मुलुक आफ्नै लगानीमा ठूला आयोजना बनाउन सफल भएको छ ।”
समितिका अधिकांश सदस्यहरुले आयोगको असीमित अधिकार भएको भन्दै यसको ऐन संशोधन गर्नुपर्ने औंल्याएका छन् । सांसद इच्छाराज तामाङ, जगदिशनरसिंह केसीलगायतका सांसदले यस्तो विचार व्यक्त गरेका हुन् ।
आयोगमा प्राप्त १ हजार ७२६ निवेदन मध्ये १ हजार ६९ आयोगमा कुल ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ वक्यौता उपर निवेदन प्राप्त भएकोमा ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ निवेदन उपर फर्छ्योटको कारबाही गर्दा ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । यो नै मिलेमतोको शंका भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ ।
समग्र राजश्व उठाउने वक्यौता रकमको ६८.७३ प्रतिशत मिनाहा दिई सम्झौता गरिएको छ । ३१.८६ प्रतिशतमात्र असुल भएकाले ठूलो आर्थिक अपराध भएको औंल्याएको थियो । जनताबाट असुल गरिएको भ्याटसमेत आयोगले छुट दिएको छ । – बाह्रखरी
जर्मनीबाट नेपाललाई अतिरिक्त अनुदान प्राप्त हुँदै…
निरन्तर घटबढ भइरहेको सुनको भाउ यति पुग्यो आज…
बढ्यो विदेशी पैसाको मुल्य!! यस्तो छ आजको लागि साउदी ,कतार, मलेसियन लगाएत विभिन्न देशको मुद्राको सटहीदर…
सुनको भाउ यति छ आज…